Pasi pane humwe hutatu hwemashoko anowanzopikisana nekodzero dzemhuka, uyewo mhinduro kune izvo zvinopesana.
Kana zvakanaka kuti shumba dzidye nyama, inofanira kuva yakanaka kuti vanhu vadye nyama.
Martin Hunter / Stringer / Getty Images News / Getty Images
Shumba, iri chikafu, ndiyo inonzi inonzi cartivore . Iyi ndiyo mhuka inofanirwa kudya mishonga yemhuka kuitira kuti ipone. An amino acid inonzi taurine, ikemikari inowanikwa chete mumhuka. Izvo hazvigoni kuumbwa, naizvozvo, kunyange makati akavharwa, zvose makuru uye maduku, anoda nyama mukati mokudya. apo vanhu vasingaiti. Saka shumba hadzina sarudzo, asi vanhu vakawanda vanoita.
Kunze kweizvozvo, pane zvinhu zvakawanda izvo zvakanaka kuti shumba dziite. Vanogona kutamba nezvokudya zvavo vasati vauraya uye vachiipedza, chiito chisingazivikanwi pakati pevanhu. Pakave pasina zvidzidzo zvinoratidza kuti shumba dzinonzwa urombo pamusoro pemhuka dzazvo, asi vanhu vari vanonzwira tsitsi kune vamwe, mupfungwa dzepfungwa dzepfungwa dzakashata zvisinei. Dhiyabhorosi shumba dzine anopfuura mumwe mudiwa anotsvaira pakati pevanhu. Uyewo, shumba yeshumba inouraya vana veimwe shumba duku kuitira kuti iwedzere ropa rake. Edza izvozvo, uye iwe unogona kutarisa mapurisa asingatori nemutsa mukutsanangura kwako kuti "shumba dzinozviita."
Sangano reAmerican Dietetic Association rinotsigira kudya kwevashani: "Ndiyo nzvimbo yeAmerican Dietetic Association iyo yakaronga zvakakodzera kudya kwemiti , zvinosanganisira kudya kwemiti yemafuta kana vegan, inopa utano, inekudya zvakakwana, uye inogona kupa hutano hunobatsira mukudzivirira nekurapa dzimwe zvirwere . "
Kodzero dzezvipfuwo ndeyanyanyisa.
Ingrid Newkirk ane mubairo. Getty Images
Zvakanyanyisa? Zvechokwadi? Ingrid Newkirk akambotaura kuti paakanga achipa imbwa tofu pachikwata chebhodhi, mumwe munhu akamubvunza kuti chii chaiva mariri. Akatsanangura nezve soy, iyo mubvunzi akapindura kuti "yeecchh." Saka ngatitorei izvi zvakarurama, murume uyu neshamwari dzake dzose vanodya imbwa dzinopisa dzizere nemhando dzose dzezvinhu zvinosemesa zvinosanganisira "mhondi mitsvuku yakagadzirwa, vazhinji vanobatanidzwa pamwe chete uye vakaiswa mukati menyama." Zvimwe zvinhu zvinowanikwa mumbwa dzinopisa zvinosanganisira bone, plastiki, metal, rodents nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. "
Uye vane kodzero yemhuka dzakanyanyisa?
Izwi rokuti "zvakanyanyisa" rinotsanangurwa se "yehutsika kana mutsa wakanyanya kurega kubva kunewo munhu wose kana wepamusoro." Mune mhaka yekodzero dzemhuka, hapana chakakanganisika nekutsvaga mhinduro dziri "yakanyanyisa" uye kure nemamwewo. MuUnited States, kurapwa kwakakwana kwemhuka kunokonzera mhuka kutambura nekufa pamapurazi efekitari , muma laboratori, pamapurazi emafuta, mumakumbo emisungo, muzvipfeko zvehuputi, uye mune zvinyorwa uye circuses. Kuchinja kwakanyanya kunofanirwa kuchengetedza mhuka kubva kune idzi.
Uye regai ndikusiyei nemufungiro umwe wekupedzisira: vanhu vanotakura mhuka vanoisa zvitunha zvezvipfuwo zvinourawa mumuromo mavo apo vegan inogona kuisa mhuka iyo yakafa muguva. Ndezvipi zvakanyanya?
Kana zvikodzero zvemhuka dzaiva nechokuita, mhuka dzemhuka dzaizoparara.
Mukadzi anobata chikafu achiita seanofara. Getty Images
Icho chokwadi chiri kukakavadzana nekuda kwekukakavara. Iwe unonyatsoita here kuti tibvumira mashutu, Rottweilers, Tennessee Walkers, Vietnamese chikafu-mombe dzeguruva neAbyssinian Guinea nguruve kuti dzipukunwe kubva pasi peNyika. Mhuka / Bhudhi yevanhu yakasimba kwazvo kuti izvozvo zviitike. Kana tikarega kubereka mhuka dzakagadzirwa, vamwe vaizopona uye vamwe vaizopera. Hapana anoda kuti mhuka idzi dzisunungurwe musango, asi vanhu vashomanana vanopukunyuka nguva dzose. Feral cat uye imbwa makoloni yaizopona. Kutanga vanhu vakawanda venguruve varipo. Kune mhuka idzodzo dzisina kukodzera kurarama musango, kupera hachisi chinhu chakaipa. "Broiler" hukuku dzinokura zvakakura, dzinokura matambudziko pamwe chete nemapfungwa. Mhou zvino dzinobereka zvinopfuura kaviri mukaka sezvakaitwa makore makumi mashanu adarika, uye mazamu edzimba akawandisa zvokuti haasati awanika. Hapana chikonzero chekupfuurira kubereka mhuka idzi. Pane chakaipa kupfuura rufu.
Kuchinja kunogona kutyisa, asi sangano rakashanduka pamusoro pemakore nekuda kwemamwe masangano evanhu uye kodzero dzemhuka dzichava dzakasiyana.
AR vashandi vane kodzero yekuve vegan, uye vanofanira kuremekedza kodzero yangu yekudya nyama.
Vegans vari kukura mazita. David Johnston / Getty Images
Kudya nyama kunoputsa kodzero dzemhuka kuti dzigare uye dzive dzakasununguka, saka vanoita kodzero dzemhuka havatendi kuti vanhu vane tsika yekudya mhuka. Mvumo yekufambisa mhuka ndeyeVANHU voga vanotaura kune mamwe marudzi kunze kweavo, uye vanotaura nevevanhu vasingatauri zvechokwadi. Vanhu vanoita zvechirwere chekurapa kenza, kana kukurudzira ruzivo rwevhisi, kana chero chimwe chikonzero chinogona kukanda mukati maro kazhinji vane kenza kana mudiwa anobata nekenza, autism, dementia ... chero chii chaicho. Ikoko kune kubatsirwa kwakapfurikidza kune ava vanoita-zvakanaka, asi vashandi vezvimhuka havangave nechinangwa chekuzvipira kumabasa avo. Vanozviita nokuti vanoremekedza mhuka. Mhuka hadzina kumira mudare kana. Vanhu vakavhiringidzika, zvichida nekuda kwechirwere kana chiito chemhosva, vanogona kunge vane zuva ravo mudare. Mhuka haigone. Saka vamwe vanofanira kutaura pamusoro pavo. "Kodzero" yako yekudya nyama inopesana ne "kodzero" yeimwe yezvisikwa zvaMwari kuti ipone. Vanongoda kuita nzira yavo munyika. Mumwe munhu anofanira kutaura pamusoro pavo. Uye semamwe madhechi anoda vateveri kugogodza pamasuo uye mamamishinari ari gehena-akada kushandura "vatadzi," avo vakagamuchira mararamiro ehupenyu hwemaitiro vanonzwa sevangwarira ne "chitendero" chavo sevamwe.
Nezvemitemo yepamutemo, muUnited States, kudya nyama kune mutemo uye mitemo yedu inobvumira mhuka kuti dziurawe kuti dzive zvokudya. Zvisinei, varwi veA AR havagoni kuramba vakanyarara mukusaruramisirwa uye vane kodzero yepamutemo yokusununguka kutaura kunodzivirirwa nemutemo. Kutarisira varimi veA AR kuti varambe vakanyarara kukundikana kuremekedza kodzero yavo yekutaura ivo vosimbisa veganism .
Vegans vanouraya mhuka, zvakare.
Zvinenge zvisingabviri kuti munhu ararame pasi pano asingaiti kukanganisa nekufa kumhuka. Mhuka dzinourawa uye dzinodzingwa pamapurazi kuti dzikure mbeu; Zvigadzirwa zvemhuka zvinoonekwa munzvimbo dzisingatarisirwi semotokari emotokari; uye kusvibiswa kunoparadza nzvimbo dzomusango uye mhuka dzinovimba nadzo. Zvisinei, izvi hazvina chokuita nekuti mhuka dzinokodzera kodzero, uye kuva vegan ndiyo imwe nzira yekuderedza kusagadzikana kwakaipa pamhuka. Tarisa pazviri nenzira iyi: unoda kukuvadzwa kunoitwa mhuka uye zvisikwa MUZITA RAKO? Icho chirevo ndechokuti, zviputi zvinoshingaira kutama zvishoma pasi pano uye kusiya soro kadiki yepamusoro. Imwe haigone kuve yakakosha uye yemu carnivore. Nzira ipi yehupenyu inotungamirira kunyika yakanaka kune vanhu, nekuda kwemhuka uye yehupenyu hweramangwana rePasi?
Kodzero dzinobva pakukwanisa kufunga - kwete kukwanisa kutambura.
Iko kukwanisa kufunga semunhu ndeye chikonzero chisina kukodzera chekodzero. Wadii kuisimbisa pamusana pokukwanisa kubhururuka kana kushandisa echolocation kana kufamba kumadziro?
Uyezve, kana kodzero dzinobva pakukwanisa kufunga, zvino vamwe vanhu - vacheche nemafungiro asina simba - havakodzeri kodzero, asi vamwe vasiri mhuka dzevanhu vane mano okufunga semunhu vanofanirwa kodzero. Hapana munhu ari kukakavadzana nekuda kwechokwadi ichi chakaipa apo vanhu chete vane ruzivo rwakagadzikana rwezvipenyu zvakasiyana-siyana mumhuka yemhuka vakakodzera kodzero.
Kukwanisa kutambura kunonzwisisika sechirevo chekodzero dzekubata, nokuti chinangwa chekodzero ndechekuita kuti avo vanogona kutambura kana kodzero dzavo dzisingabvumirwi havatenderwi kutambura zvisina kufanira.
Mahatma Ghandi akati "Ukuru hwenyika kunogona kutongwa nenzira iyo mhuka dzayo dzinobatwa." Kana iwe usingafungi mhuka iri mumufananidzo iri kutambura, iwe uri mu-la-land. Mhuka dzine nheyo yepamusoro yenyoka sezvinoita vanhu. Ndiko apo zviratidzo zvinorwadza zvinoita chinhu chavo. Hapana chikonzero chekutenda kuti nzvimbo yemarwadzo evanhu inenge isingapfuuri zvakanyanya kudarika yevanhu vasiri vanhu.
Mhuka haigoni kuva nekodzero nokuti haina mabasa.
Apo huchi hunosimuka, varimi havachakwanise kupora mbeu yavo. Getty Images
Izvi zvinopesana. Mhuka dzose dzine chinangwa muupenyu. Kunyange nenyota, chirwere chekuuraya ropa, zvokudya zve shiri. Nyeredzi idzo dzakamira pamombe hadzisi kunyanya mhou kune mutyairi weUber! Vari kudya maikiti, anovabatsira kuti vaite basa ravo, izvo zvinoreva kudonha mbeu nekuita mbeu. Zvose mhuka zvine chinangwa, funga nezvevashandi vanodya mhiri, sharks vanobvisa gungwa rezvisikwa zvakanyanya uye imbwa dzinobatsira mapofu.
Dambudziko rezvino pamusoro pekurasikirwa kweuchibees. Maererano neDADA, kurasikirwa kweuchibe kuchakonzera ngozi huru kuhutu hwehupfumi hweUnited States.
Kungofanana nekwanisi yekufunga, kuva nemabasa isarudzo isina kukodzera yekubata kodzero nokuti mamwe mapoka evanhu - vana, avo vanorwara mupfungwa, vanokanganisa mupfungwa kana vanorega mupfungwa - havana mabasa. Kana chete avo vane mabasa vakakodzera kodzero, saka avo vanorwara mupfungwa havazove nekodzero uye vanhu vaizova vakasununguka kuuraya nekudya.
Uyezve, kunyange zvazvo mhuka dzisina mabasa, dzinoteererwa nemitemo yevanhu uye kuranga kusanganisira kuiswa mujeri uye rufu. Imbwa inorwisa munhu inogona kudiwa kuti igare yakavharidzirwa / yakavharwa, kana inogona kutongerwa kufa. Mhuka inodya zvirimwa inogona kupfurwa nekuurayiwa nemurimi pasi pemvumo yekuderedza.
Uyewo, vashomanana vanofunga nezvemabasa avo kune mamwe mhuka, asi tinoda kuti mhuka idzodzo dzinzwisise kodzero dzedu nekuuraya mhuka dzinopindira kodzero dzedu, kana dziri mhondi, nondo kana mhumhi.
Zvirimwa zvine manzwiro, zvakare.
Ndeipi inotambura nezvimwe ?. Getty Images
Iyi nharo ndechimwe chezvinhu izvo zvisinganzwisisiki vanhu vanotaura kana vese vari kunze kweammo. It's prima facia crap. Ndiani anoti mbeu dzinonzwa kurwadziwa? Kana ichocho chiri chikonzero chako chokupedzisira chekuramba kodzero dzemhuka, nharo yako isinganzwisisi inoda kushanda. Ita tsvakurudzo pamusoro pazvo uye dzokera kwandiri. Paunenge uri pairi, enda mberi uye kuratidza kuti mwedzi uchienda wakanga uri mukuru mukuru.
Kana zvirimwa zvinonzwa, izvo zvinogona kuisa vanhu munzvimbo yakafanana neshumba sezvo tisingakwanisi kurarama tisina kudya miti, saka tinogona kuva netsika dzakanaka mukudya zvirimwa.
Uyezve, kana mbeu dzichinzwa kurwadza, izvozvo hazvirevi kuti kudya zvirimwa uye kudya mhuka kunofanana nemafungiro nokuti zvinotora mimwe miti yakawanda kudyisa omnivore ichienzaniswa neve vegan. Kudya mbeu, uswa uye zvimwe zvokudya zvekurima kumhuka kuitira kuti tikwanise kudya mhuka haina kukwana, uye inouraya zvinomera zvakawanda kupfuura kuva vegan.
Kana iwe uchidavira kuti mbeu dzinoshuva, chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvaungaita kwavari ndechokuti uende vegan.
MIchelle A. Rivera akachinjwa uye akadzokorora zvakare nyaya ino muchikamu.
Chii Chinonzi Kuvhiringidzwa Kwefaira Kubiridzira?
Chii Chinonzi Kuipa Kwekuwana?
Chii chinonzi Veganism?
Nzira Dzokukumbira Nzira yeChechi Case
Chirwere Chekufa kweZvizvarwa
Chii Chichaitika Kumhuka Kana Munhu Wose Achienda Masikati?
Chii Chinonzi Alford Plea?
Chii chinonzi Cruelty-Free Products?
Chii Chinonzi Kuipa kweArson?
Nhoroondo yekuuraya kweHarambe
Mhemberero dzeGore Idzva dzeHindu Nharaunda
Nyika Dzakarongeka: Nyika Dzakaswedera Pedyo Nezuva
Chirungu 'Chikuru' Kupfuura Spanish - Saka Chii?
Ngirozi huru dze 4 Zvikamu: Air, Moto, Mvura, uye Nyika
Dzidza Kugadzirisa Chiito cheFrench "Tuer" (kuuraya)
Kudzokorora: RGM New Age Painting Maknives
MUTA WOKUTAURA MUTAURO Kuenzaniswa kweKubvuma kuChikoro Che Connecticut
Pro Hints Pakutenga Puri Penyu Yenyu Yakanakisisa Cue
Hondo Yenyika II Chirangaridzo muWashington DC
Pro Pool - Gumi Billiards Mazano Vavengi Vako Vasingazivi
Gedhi reTabernakeri reDare
Astronomy, Movies, uye Oscars
Simoni Bolivar Crosses the Andes
Dipole Tsanangudzo uye Muenzaniso
"Tinokuda Krisimasi Inofadza"
Uya, Tora, Tora, Tora
Kudzoka Kwakaitwa Kunoshandiswa neChirwere Skaters
Zvinoreva "Ziso" kana "Tenzi" Mukudhinda
Zvikanganiso Zvakajairika muchiChirungu - Munhu wese uye Mumwechete
Verb verb Conjugations: Festeggiare
10 Anozivikanwa Fictional Dinosaurs